Global Voices teny Malagasy » Voasivana Ny Media Sosialy Taorian’ny Vato Tokana Manohitra Ilay Filoha Vaovao · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Marsa 2013 16:36 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Mediam-bahoaka, Politika
Niharan'ny sivana ny media sosialy Shinoa noho ny adihevitra mikasika ilay olona tsy fantatra nandatsa-bato tokana manohitra ny fanendrena ofisialy ny lehiben'ny kaominista Xi Jinping  ho filoha.
Nandritra ny fandahatsa-bato miezinezina, araka ny efa nampoizina, voafidy ho filohan'i Shina tamin'ny vato 2.955 mankasitra azy sy telo tsy nifidy i Xi tamin'ny 14 Martsa 2013 nandritra ny Kongresy Nasionalim-bahoaka faha-12 ao Shina .
Vato iray avy amin'ny mpanohitra ihany no hita nandritra ny fanisam-bato, ary tsy nampahafantarina ny momba ilay solombavambahoaka nandatsaka izany vato izany.
Nirohotra tany amin'ny habaka blaogy madinika Shinoa malaza, Sina Weibo avy hatrany ny maro mba hanontany ilay olona nandatsa-bato tokana manohitra, saingy niharan'ny sivana avy eo ny Weibo, ary voafafa avokoa ny maro tamin'ireo fanehoan-kevitra manontany momba ilay “vato tokana” ary nampidirina tao amin'ny lisitra lava be misy ireo teny voarara ilay teny hoe “vato tokana” avy eo .
Nivezivezy tao Weibo ny valim-pifidianana, ary nanontany ny momba ilay olona iray nandatsa-bato manohitra ny mpiserasera.
Noderain'ny fampahalalam-baovaom-panjakana ho nahazo vato be indrindra hatramin'ny vanim-potoana Mao Zedong  ny filoha Xi . Tao amin'ny Weibo, nivezivezy tao ny amin'ny vaovao ifeng [zh] ny fampitahana ny vokatry ny latsa-bato tamin'ny fifidianana filoham-pirenena taloha: Nahazo vatom-pitsipahana 35 i Jiang Zeming  raha toa kosa ka telo ny vatom-pitsipahana azon'ny filoha vao niala Hu Jintao .
Mpisera Weibo iray “Zeng Langbo” naneho-hevitra  [zh] tamim-pivazivaziana:
Toa lasa miha-demokratika i Shina.
Mpanadihady vaovao “Laoxu Shiping” nanoratra hoe  [zh]:
Tsy zava-baovao ny nahalany an'i Xi, tsy vaovao ihany koa ny fitambaran'ireo vato nifidy azy, saingy ilay vato tokana manohitra sy ny momba ilay olona nandatsaka izany vato izany no tena vaovao.
Mana-pahaizana sy mpanoratra malaza Wu Jiaxiang nanohy niresaka momba izany  [zh]:
Tsy vaovao ilay vato manohitra, fa ny fahazoana mamoaka izany no vaovao.
Nihevitra ireo mpiserasera sasany fa avy amin'i Xi ihany ilay vato manohitra. Sheng Dalin, mpanadihady vaovao ao amin'ny gazety Henan  ao Dongfang Jinbao nanoratra hoe  [zh]:
Angamba mety i Xi ihany ilay olona? Nahare izahay fa nandritra ny Kongresy Nasionalim-bahoaka faha-8, iray ihany ny vato namala-peo, izay nampisafoaka ireo departemanta manokana, avy tsikaritr'izy ireo fa i Mao ihany no nandatsaka ilay vato!
Nihevitra ihany koa ireo mpiserasera sasany fa natao fanahy iniana ilay vato manohitra mba hiteraka adihevitra. “yjhjerry” nanoratra hoe  [zh]:
Manahy aho fa natao fanahy iniana izany. Milaza matetika ny imperialista fa haintsika ny milalao ny fifidianana, koa maninona raha vato roa avy amin'ny mpanohitra no mody naseho? Mampiseho izany fa mamela ireo feo isan-karazany haneho ny heviny isika.
Mpisera hafa “MC-Mark_Flghter” nihevitra  [zh] fa angamba nisy olona nanindry bokotra tsy izy .
Caixu kosa nanoratra  [zh] fa tsy zava-dehibe ny fahafantarana izay nandatsaka ilay vato manohitra:
Tsy ilaina akory ny miady hevitra izay olona nandatsaka ilay vato manohitra, na nekena ilay vato manohitra ka tokony horesahana ny momba izany .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2013/03/20/46941/
 Kongresy Nasionalim-bahoaka faha-12 ao Shina: http://en.wikipedia.org/wiki/12th_National_People
 Mao Zedong: http://en.wikipedia.org/wiki/Mao_Zedong
 vaovao ifeng : http://weibo.com/2615417307/znv8RmBML
 Jiang Zeming: http://en.wikipedia.org/wiki/Jiang_Zeming
 Hu Jintao: http://en.wikipedia.org/wiki/Hu_Jintao
 nanoratra hoe: http://weibo.com/1358776365/znnV5hmX7
 nanohy niresaka momba izany: http://weibo.com/1497327642/znnVnC91q
 nanoratra hoe: http://weibo.com/1407728082/znrAmoAUy